Chaayiinaa - BBC News Afaan Oromoo
Dowwannaan preezidaantiin Chaayinaa Kooriyaa Kaabaatti taasisan waggoota 14 as isa jalqabaati jedhameera.
'Huawei'n bilbila 'smartphone' dacha'u gabaatti baasuuf ture tursiise
Dhaabbanni Chaayinaa guddichi kun akka jedheetti, omisha bilbila harkaa dacha'u, 'Mate X' jedhamuufi dhiheenyatti gabaaf dhiyeessuuf karoorsee ture hanga Fulbaana dhufuutti tursiisu himeera.
Yu'ichi Ishii'n hundeessaa kaampanii kiraadhaan akka maatiitti,hiriyaa, warraa fi firaatti Jaappaan keessatti hojjatu. Miira maatii hedduu horachuu fi homaa dhabuu BBCtti himeera.
Huawei'n mootummaa Chaayinaa waliin hidhata qabaachuu haale
Huawei hoggaanaan Nageeenya Saayibariii miseensota Paarlaamaatti wayita himan takkaa Chaayinaan kana raawwadha jedhamne hin gaafatamnee jedhan.
11 Waxabajjii 2019
Hookkarri Sudaan keessa bubbule biyyoota naannawa ishee kanneen akka Sa'uudii Arabiyaa ,Ijiptiifi Tarkii akkasumas biyyoota addunyaa jajjaboo fi biyyoota ollaa gidduutti walmorkii yaadaa uumeera. Kunoo akkamiin akka isaan itti seenan hubadhaa.
Hiriirri guddaa wixinee seeraa yakkamaa dabarsanii kennuu jedhu irratti Hong Kong gaggeeffame
Miidiyaaleen Chaayinaa ammoo Chaayinaa miidhuuf jecha hookkaraa fi hiriirichi akka gaggeeffamuuf humnoota alaatu dhiibbaa godhe jechuun gabaasaa jiru.
Uggurri bilbilawwan ismaartii Huawei appiiwwan duraan buufaman kunis instaagramiifi Whatsapp irrattis haaluma wal fakkaatuun dhurkameera.
Daandiin qilleensaa Itoophiyaa fuulasaa gara Chaayinaatti garagalfachaa jiraa?
Uggurrii Huwaei mudate maaliif Afriikaa yaadesse?
Haala Huawei mudateen wal qabatee motummoonni Afriikaa fi fayyadamtoonni teknoolojii Ameerikaa ykn Chaayinaa filachuu ni dirqamu laata?
Teekinooloojii balaa hamaa baatuudha jechuun Huawei kan komataa turan Pirezidaantiin US Doonaald Tiraamp, hariiroo daldalaa Chaayinaa waliin qabaatan keessaa tokko garuu kaampaanii kana ta'uu dubbatan.
Baqqaana ozoonii: Kemikaalli dhorkame Chaayinaa keessa hojiirra oola jiraachuu bira gahame
Ragaan atomosferii irraa walitit qabame Baha Chaayinaatti kemikaalli ozoonii miidhu hojiirra oolaa jira.
Oomishtoonni kophee taarifa US Chaayinaarra keesse komatan
Warshaalee kophee kanneen akka Nike fi Adidas dabalatee dhaabbileen daldalaa 173 taarifa olaanaa US Chaayinaarra keesse komatan.
Dubartoonni Kooriyaa Kaabaa 'Chaayinaatti daldala quunnamtii saalaaf dirqamu': Gabaasa
Dubartoonni Kooriyaa Kaabaa hedduun Chaayinaa keessatti daldala quunnamtii saalaa irratti hirmaachuuf akka dirqamaa jiran gabaasi mul'ise.
21 Caamsaa 2019
Tiraampi moobayilootni Huwaawee applikeeshinoota kuusaa 'Google' akka hin fayyadamne dhorkan
Moobaayilootni Huwaawee siistema Andirooyidii akka hin fayyadamneef mootummaan Ameerikaa kaampanota dhorkaman keessatti galmeesse.
20 Caamsaa 2019
Kevin Mallory: Hojjetaan CIA duraanii Chaayinaaf iccitii kenne hidhame
Namni umurii waggaa 62 Kevin Mallory iccitii waraanaa baasuun himatamee waggaan 20 itti murtaa'e.
Namtichi 'mootummaa' jedhee saree isaaf maqaa baase hidhame
Lammiin Chaayinaa saree isaaf maqaa seera kabachiiftotaa baase guyyoota 10'f hidhaa bu'e.
Paakistaanitti namoota hidhataniin hoteelli abbaa urjii shanii tokko haleelame
Haleellichi jalqabee sa'aatii dheeraan booda xumurame
Mootiin Taay Vaajiraalongkoorn eegduu isaa fuudhuun giiftii ishee taasisera
Putiin fi Kiim yeroo jalqabaaf qaamaan walargan
Pirezdaantiin Raashiyaa Vilaadmiir Putiin Hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joon-un waliin yeroo jalqabaaf Raashiyaatti walargan, Walga'iin Tiraampii fi Kiim milkii malee xumuramuusaa boodadha hooggantoonni lameen kan walargan.
Carraafi yaaddoon Pirojektii Chaayinaa 'Belt and Road Initiative' jirtu maal?
Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad jila sagantaa Belt and Road Initiative irratti hirmaachuuf magaalaa Beejiingi jiru. Carraafi yaaddoon Pirojektii Chaayinaa 'Belt and Road Initiative' jirtu maali?